एतिहासिक मकवानपुरगढीमा राष्ट्रिय झण्डाको कन्तविजोग ,झण्डा फेर्न माघ १० गते विजयोत्सवनै आउनुपर्ने हो ? - Khabar Break
एतिहासिक मकवानपुरगढीमा राष्ट्रिय झण्डाको कन्तविजोग ,झण्डा फेर्न माघ १० गते विजयोत्सवनै आउनुपर्ने हो ?
शुक्रबार मकवानपुरगढी दरबारमा देखिएका पर्यटक र च्यातिएर धुजाधुजा भएको राष्ट्रिय झण्डा । तस्बिर/खबरब्रेक
हेटौंडा । ऐतिहासिक महत्व बोकेको मकवानपुरको मकवानपुरगढी दरबार क्षेत्रमा राखिएको राष्ट्रिय झण्डाको कन्तविजोग भएको छ । दरवार क्षेत्रमा राखिएको नेपाली राष्ट्रिय झण्डा च्यातिएर धुजाधुजा हुँदा समेत सम्बन्धित गाउँपालिकाले बेवास्था गरेको पाईएको हो ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नंबर २ मा पर्ने दरबार क्षेत्रमा दैनिक सयौ पर्यटक आउने गर्छन् । शुक्रबार दरबार घुम्न पुगेका हेटौंडा-१५ रविन लामाले राष्ट्रिय झण्डा सामु तस्विर खिच्न लाग्दा झण्डाको अवस्था देखेर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,“देशको शान राष्ट्रिय झण्डा यति धेरै च्यातिएको अवस्थामा देख्दा किन कसैको ध्यान गएन,यति अग्लो ठाउँमा रहेको झण्डामा यहाँका स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिहरुको किन आँखा परेन ? ।” उनले स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गरेको समेत बताए । तस्बिर खिचेर सामजिक सञ्जाल मार्फत सचेत गराउने उनको भनाई थियो ।
यहाँ हरेक वर्षको माघ १० गते विजयोत्सव मनाईन्छ । २ सय ५७ वर्षअघि गोर्खाली सेनाले बङ्गाली सेनालाई पराजित गरेको दिन माघ १० गते मानिएको दिन हो विजयोत्सव ।
गत वर्ष माघ १० गतेको विजयोत्सवमा राष्ट्रिय झण्डा फरफराईएको थियो । तेही झण्डा हालसम्म आइपुग्दा पुरानो भएर च्यातिएर धुजाधुजा भएको हुनसक्ने स्थानीहरुको भनाई छ ।
यता मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका वडा नंबर २ का वडा अध्यक्ष बखान सिंह पाख्रिनले मकवानपुरगढी दरबार क्षेत्रमा राखिएको राष्ट्रिय झण्डा हरेक ३ महिनामा फेर्ने गरिएको बताए । उनले भने,“कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउन भयो,दरबार क्षेत्र पनि बन्द रहेको थियो । त्यो समयमा झण्डा फेर्न नसकिएको हो । अब आईतबार झण्डा फेर्छौ ।”
यस्तो छ च्यातिएर धुजाधुजा भएको राष्ट्रिय झण्डाको तस्विरहरुः